August | 2017 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
I will fight for Malaysia IF there isawar with Myanmar as Myanmar kicked me out and Malaysia warmly embraced me with love and compassion
August 30, 2017 August 30, 2017 drkokogyi
I will fight for Malaysia IF there isawar with Myanmar as Myanmar kicked me out and Malaysia warmly embraced me with love and compassion.
But MY PERSONAL case should not bealandmark case for my remaining Muslim brothers and sisters who are still Myanmar citizens. I have no doubt that they will fight for their beloved country Myanmar.
” မောင်တောစတိုရီ “
August 30, 2017 drkokogyi
မောင်တောဒေသပြဿနာဟာ လွတ်လပ်ရေးကြိုကာလ က စတယ် လို့ ကျနော် သုံးသပ်ပါတယ်။
ဒီဒေသမှာ ဘင်္ဂလီနွယ်မွတ်စလင်တွေဟာ ဟိုးနှစ်ရာတန်းချီနေထိုင်ခဲ့ကြမှာ မလွဲပါဘူး။ ပုဂံမြကန်တည်ရာမှာတောင် ပုဂံသားထဲ ပျူ၊ ဗမာ၊ မွန်နဲ့တွဲပြီး ကုလား လို့ ကျောက်စာထိုးခဲ့မှဖြင့် ဘင်္ဂလား နဲ့ ပိုနီးတဲ့ မောင်တော ကုလားတွေ မရှိဘူး ပြောတာဟာ တဘက်ပိတ် ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူတို့လဲ ရောနှော နေထိုင်ခဲ့ကြမှာပဲ။
ခိုးချင်တာလဲ…..ပြာ…လို့ လက်နှေးတာလဲ…….ချာ…လို့
August 29, 2017 drkokogyi
ခိုးချင်တာလဲ…..ပြာ…လို့
လက်နှေးတာလဲ…….ချာ…လို့……
သူတို့ လိုက်သတ်နေတဲ့ လူတွေကို အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့
ဟင်……. အကြမ်းဖက်သမားတွေက ဘယ်အရပ်သားမှလဲရန်မရှာဘူး….လို့
ဒါနဲ့ ကမန်းကတမ်း….ဟိန္ဒူ တွေ အသတ်ခံရပါတယ် ဆိုပြီး ထုတ်ပြရတယ်..
အချိန် မမှီတော့ဘူး……ဘယ်သူကမှ မယုံတော့ဘူး…..
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပြသနာရှာလာတယ် ကျနော်တို့ ဘာမှမပြောဘူး ကျနော်တို့က ရိုဟင်ဂျာတွေမှ မဟုတ်ပဲကိုး
14 hrs · Kuala Lumpur ·
ကျနော်တို့ ဘာမှမပြောဘူး
ကျနော်က အိန္ဒိယသားမှ မဟုတ်တာကိုး
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပြသနာရှာလာတယ်
ကျနော်တို့က ရိုဟင်ဂျာတွေမှ မဟုတ်ပဲကိုး
August 28, 2017 drkokogyi
တိုက်ခိုက် …သတ်ဖြတ်…. မီးရှို့…ဖျက်စီး…
…… ခေါ်တာလို့ ယူဆမိပါတယ်
“တရားမဝင် ဝင်လာတယ် ဆိုတဲ့ ပြဿနာ”
August 27, 2017 drkokogyi
I am nowaMalaysian but I still love my native country, Myanmar and ALL its citizens. Now I could see and treat ALL the various races and religious groups migrated from Myanmar. For me, whether Rakhine Buddhist, Bama Buddhist or any one is not imp. I took care and love all of them. I even always give due respect to Monks and Pastors. I know that they all also understand and TRUST me…TQ…after reading your post…my tears flow.
ဘူးသီးတောင်မောင်တောအရေးပြဿနာမှာ အဓိကအခြေခံမှုဟာ တရားမဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်လာတယ် ဆိုတဲ့ ပြဿနာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုပြဿနာက ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကျော်လွန်ခဲ့ပြီ။ အဲဒီပိတ်ဆို့ထားတဲ့ စခန်းထဲမှာတင်ကလေးတွေ ထပ်မွေး၊ အဲဒီကလေးက လူလားမြောက်လာခဲ့ပြီ။
အဲဒီကလေးနေရာက စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ ဘုမသိ ဘမသိ လူဖြစ်လာရတယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာ နိုင်ငံမဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့။ ကျနော်တို့ အဲဒီလူကလေးတွေပေါ်မှာ မျှတကြပါရဲ့လား မေးခွန်းထုတ်ကြရမှာပါ။
ဂျူးတွေကို သတ်သလို သတ်ဦးမလို့လား။ သတ်နိုင် သတ်ရဲသလား။ မသတ်နိုင် မသတ်ရဲရင် အဲဒီဘူးသီးတောင်မောင်တောသားတွေဟာ မြန်မာပြည်ကလွဲ ဘယ်မှ သွားစရာ မရှိတဲ့ မြန်မာပြည်ပေါက်တွေ လို့ မြင်ပြီး ကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရဖို့ မျှတသော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် တည်ဆောက်ရမယ်
August 26, 2017 drkokogyi
” ဒီလိုနဲ့ ပြီးသွားမတဲ့လား ”
ဘူးသီးတောင်မောင်တောဒေသ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုနေတာ ရယ်စရာကောင်းလှတယ်။
ဖမ်းမိတဲ့ လက်နက်တွေကိုပဲ ကြည့်စမ်းပါ။ သံချေးကိုက်ဓါးတွေ၊ မီးကျိုးမောင်းပျက်သေနတ်တွေ။
ပြည်ပအကူအညီ မရသေးလို့သာ အဲဒီလို အစုတ်အပြတ်တွေ ကိုင်နေတာပေါ့။
ပြောချင်တာ ဘူးသီးတောင်မောင်တောမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ ဖိနှိပ်မှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ ပုန်ကန်ထကြွမှုပါ။
အာဏာမဲ့သူပြုရင် အကြမ်းဖက်၊ အာဏာရှိသူ ပြုရင် ဖိနှိပ်ရက်စက်မှု ခေါ်ရမလားပဲ။
နှစ်မျိုးစလုံး လက်ခံစရာတော့ မဟုတ်ပါလေ။